PressReader - Grocott's Mail: 2018-08-31 - Isaqhuba itu­mente yeb­hola ekhaty­wayo EJD Dlepu
Isaqhuba itu­mente yeb­hola ekhaty­wayo EJD Dlepu
Grocott's Mail - 2018-08-31 - SPORT - NGUCHRIS TOTOBELA
Inkwankca ibiqhaq­hazelisa amazinyo, ivalele abathandi beb­hola ezindlini nge­cawa ed­lulileyo, kodwa el­og­cuntswana lidele loo ngqele ligo­duke lixo­lile. Kumd­lalo wokuqala iintshat­sheli ze-makana LFA, i-city Pi­rates, ib­huqe i-fu­ture Stars nga­man­qaku amane kwelinye kumd­lalo obuthande ukekelela calanye. I-makana Pil­lars yona iz­ibethele i-riebeck City nga­man­qaku am­athathu kwam­abini, logama i-joza Cal­lies iphumelele ngee-penalty emva kokuba ibam­bene nga­man­qaku am­abini macala ne-young killers.
Kumd­lalo ot­sale umdla welo­qaqobana la­ba­lan­deli, i-jacaranda Aces ivene amandla ne-newseek­ers. Lomd­lalo uqale kakuhle omabini lamaqela ez­imisele efunza ed­abini. Kuye kwabonakala nje zisuka ukuba lamaqela agqi­bele ku­dala ud­lala, nan­jen­goko ebe­bonakala ebuthundu phambi kweepali. I-jacaranda Aces iye yophisa kuqala emva komd­lalo omhle oqale esazul­wini se­bala kodwa nayo i-newseek­ers ayikhange iyekelele.
Kuyiwe ekhefini inkqenkqeza ngen­qaku elinye eqan­deni i-aces. Omabini lamaqela abuye aqin­isa ngakumbi kwisiqin­gatha sesi­b­ini ezama in­qaku kodwa kwanz­ima. I-jacaranda iye yayekelela umx­akatho, nto leyo eban­gele ukuba i-newseek­ers ibuye nga­mandla inkqunkqa ibuyelela kwi­ipali zeaces, kodwa abad­lali bayo bagquduza be­jon­gene nqo nonoz­inti iz­ih­landlo ezin­inzi. Kwimizuzwana nje el­ishumi phambi kokuba kuphele umd­lalo i-newseek­ers iye ya­fu­mana i-penalty emva kokuba umd­lali wan­gasemva we-aces ebambe ib­hola ngaphakathi ebhok­isini. I-newseek­ers iye yal­i­faka elo nqaku ilin­gan­isa aman­qaku.
Omabini lamaqela asebenze nz­ima ezama in­qaku lem­pumelelo kodwa at­sho phantsi kwaqhuma uthuli. Uphele umd­lalo ebam­bene ngen­qaku elinye macala. I-jacaranda Aces iye ya­phumelela nga­man­qaku amahlanu kwa­mathathu kwi­ipenalty. Imid­lalo eyan­d­ulela owa­man­qam iza­kud­lalwa ngomgqi­belo, owokuqala ngentsimbi yokuqala, kuze owe­si­b­ini uqale ngentsimbi yesithathu E-JD Dlepu. Owa­man­qam umd­lalo uyakuban­jwa nge­cawa ngentsimbi yokuqala.
Newseek­ers at­tacker hold­ing off a Jacaranda de­fender.